अमिताभ बच्चन सहित बलिउडका यि दिग्गज कलाकार नेपाल आउँदै, के हो कारण ? | Rochak
September 1, 2021 NepstokLeaveaComment on अमिताभ बच्चन सहित बलिउडका यि दिग्गज कलाकार नेपाल आउँदै, के हो कारण ?
काठमाडौ । महामारीको प्रभाव विस्तारै कम हुँदै गएसंगै बलिउड क्षेत्र चलायमान हुन थालेको छ । अब केही समय पछि भारतका दिग्गज कलाकार नेपालमा फिल्मको छायांकनका लागि आउने भएक छन् । यद्धपी नेपालमा भने फिल्म हल कहिले खुल्छ भन्ने थाहा छैन । नेपालमा बलिउड फिल्मको छायाँकनका लागि दिग्गज कलाकार नेपाल आउने भएका हुन् ।
जसमा बलिउडका सुपरस्टार अमिताभ बच्चनसहित थुप्रै कलाकारहरु नेपाल आउने भएका हुन्। भारतको अनलाइनपोर्टल पिंकभिल्लाका अनुसार अगामी अक्टुबर महिनामा सुरज बर्जात्याको फिल्म उँचाइको छायाँकन नेपालमा हुने भएको हो।
फिल्ममा अमिताभ बच्चनसहित अनुपम खेर, बमन इरानी, निना गुप्तालगायत कलाकारहरुको मुख्य अभिनय रहने बताइएको छ। साथीहरुबीचको हुने मित्रतालाई फिल्मको कथावस्तुमा समेटिएको बताइएको छ।
स्रोतको हवाला दिँदै पिंक भिल्लाले लेखेको छ, ुसुरज बर्जात्यले फिल्म छायाँकनका लागि स्थानको खोजी गरिरहेको र उनको पहिलो रोजाइ नेपाल बनेको हो। उनीहरु नेपालमा ४०९४५ दिनसम्म छायाँकन गर्ने बताइएको छ।
उक्त फिल्मलाई थ्री ह्विलर्स नामक कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ। फिल्मको छायाँकन काठमाडौंदेखि लुक्ला, नाम्चे, लाङटाङ र मनाङमा समेत हुने बताइएको छ। छायाँकन अनुमतिका लागि नेपाल व्यवस्थापन हेर्ने कम्पनीले सञ्चार मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको छ।
काठमाडौमा फेरी लम्बियो निषेधाज्ञा, विद्यालय संचालन गर्न पाइने की नपाइने ? (सूचना हेर्नुस्)